1967 Ford Mustang စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများအတွက် |Hipsen
1967 Ford Mustang အတွက် OEM C9AZ-2140 ပါသော ဒရမ်မာစတာဘရိတ်ဆလင်ဒါများ
OEM C9AZ-2140 မာစတာဆလင်ဒါများ၏ ပစ္စတင်အချင်းသည် 1 လက်မဖြစ်ပြီး 25.4 မီလီမီတာ ရှိသည်။ဒွါရဆားကစ်ဘရိတ်ဆလင်ဒါတွင် တစ်ဖက်တွင် ပလပ်ပေါက်နှစ်ခုပါရှိပြီး အရွယ်အစားမှာ မူလတစ်ခု၏ 1/2-20" နှင့် ဒုတိယတစ်ခု၏ 9/16-18" ဖြစ်သည်။ဤတွင် အခြားရည်ညွှန်းနံပါတ်များ- 5472664, 5472969, C7AZ-2140-C, C7AZ-2140-H, C7AZ-2140-M, C7ZZ-2140-C, C9AZ-2140-D, D2AZ-2140-B ဖြစ်သည်။၎င်းကို Drum brake system တွင်အသုံးပြုထားပြီး သီးခြား application မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Ford 1967-1972 ဂလက်ဆီ
Interchange အပိုင်းနံပါတ်- 5472664, 5472969, C7AZ-2140-C, C7AZ-2140-H၊
C7AZ-2140-M၊ C7ZZ-2140-C၊ C9AZ-2140-D၊ D2AZ-2140-B
ဒီဇယ်လျှပ်စစ် ဟိုက်ဘရစ်ကားအတွက် လျှပ်စစ်ဘရိတ်ဖုန်စုပ်ပန့် အပိုင်း# UP30 009286001 HLA-009286001 760687128847
ဒါတွေလျှပ်စစ်ဘရိတ်ဖုန်စုပ်စက်OE နံပါတ် UP30 009286001၊ HLA-009286001 760687128847၊ ယနေ့ခေတ်တွင် မော်တော်ယာဥ်လေဟာနယ် ဖိအားအရင်းအမြစ်သည် ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်မှ ဆင်းသက်လာပြီး အလှည့်အပြောင်းအမြန်နှုန်းသည် Vacuum ပမာဏကို များစွာအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။အင်ဂျင်ပျက်သောအခါ သို့မဟုတ် အင်ဂျင်မီးလောင်သည့်အခါ လေဟာနယ်ဖိအား လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် vaccum booster အလုပ်လုပ်မှုနှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သီးခြားဖုန်စုပ်သည့်ဖိအားအရင်းအမြစ်ကို ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ဒီဇယ်၊ ဟိုက်ဘရစ်နှင့် လျှပ်စစ်ကားများအင်ဂျင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော လေဟာနယ် ဖိအားပြတ်လပ်မှု ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ဟိအလိုအလျောက်ဖုန်စုပ်စက်assy၊ ယာဉ်တွင် သီးခြား မော်တော်ကား အစိတ်အပိုင်းများ ရှိနေသဖြင့်၊ ၎င်းသည် 12V လျှပ်စစ်-မော်တာ တစ်ခုတည်းနှင့် သီးခြားစီ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖုန်စုပ်သည့် အရင်းအမြစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ မောင်းနှင်မှု သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် အော်တိုဂီယာနှင့် တာဘိုအားသွင်းထားသော ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များ။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖုန်စုပ်ပန့်များကို အစားထိုးရန် ဒီဇယ်အင်ဂျင် စွမ်းအင်ချွေတာရန်။ ပြီးပြည့်စုံသော လွတ်လပ်သော ဖုန်စုပ်စက်အရင်းအမြစ်အဖြစ် စွမ်းအင်သုံးကား (လျှပ်စစ်နှင့် ဟိုက်ဘရစ်၊ လောင်စာဆဲလ်ယာဉ်များ)။
Quzhou Hipsen Trading Parts Co., Ltd ကို 2015 ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး ယွမ်5သန်းဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနတို့ရှိသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd (အတိုကောက် "HBS") ဟုခေါ်သော စက်ရုံတစ်ရုံရှိပြီး အဆောက်အဦဧရိယာ စတုရန်းမီတာ ၃၀၀၀ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘရိတ်အချိုးကျအဆို့ရှင်များ၊ ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါများ၊ ဘရိတ်ကာလီပါများနှင့် စသည်တို့ကဲ့သို့သော disc brake assemblies ပေါင်း 300,000 ကျော်ကို လစဉ်ထုတ်လုပ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်အဆင့်ကြောင့် သုံးစွဲသူများအကြား ရေပန်းစားပါသည်။ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားဖောက်သည် 100 ကျော်နှင့် တည်ငြိမ်ပြီး ကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ထားပြီး အများစုမှာ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကမှဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Cardone၊ Wilwood စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်၏ အစုံအလင်ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဝယ်ယူမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းဖြင့် မှာယူမှုအသစ်များ၏ အတည်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ဆောင်ချိန်သည် ရက်ပေါင်း 30 မှ 40 အထိဖြစ်သည်။"Work together, strive for Better" ဟူသော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး ဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားပါမည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့တွင် Cardone၊ Wilwood၊ KNOTT၊ CONEX၊ ​​Hayes Brakes Performance၊ Zong Shen နှင့် အခြားနာမည်ကြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်များစွာရှိသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် 100% စမ်းသပ်မှုဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်ပါသည်။
3. သင့်အားကူညီရန် ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် TS16949 စံနှုန်းအတိုင်း ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် Yiwu၊ Ningbo နှင့် Shanghai တို့နှင့်နီးသော Zhejiang ၏အရှေ့ဘက်၊ Quzhou တွင်တည်ရှိပြီး သွားလာရေးအဆင်ပြေပါသည်။
Nissan Picku အတွက် အလူမီနီယမ် မာစတာဘရိတ်ဆလင်ဒါ...
OEM F0TZ-2140-A MC39953 ပါရှိသော မာစတာဆလင်ဒါများ...
Chrysler လေဆာမာစတာဘရိတ်ဆလင်ဒါ OEM 4271388
OEM# 03212210423 ဖြင့် ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါအတွက်...
OEM MC1921H အတွက် ဒရမ်ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ...